We thank you for your precious time visiting to this page. We also Welcome you to contribute and share your information as your chitchat, your exchange rates & trade prices, your thoughts, your talks, your funny any to us. Come and Join here. However you contribute in CBox, we all gratefully appreciate you. The more you "Share", the "Warmth" you get.
Justice: မြို့သစ်စီမံကိန်း စနေပြီလား?
28 Feb 17, 07:23
slothileleri: slot taktikleri, slot oynama, slotlar hakkında bilgi http://slothileleri.com
4 Feb 17, 17:27
porn: I wish you continued success
1 Feb 17, 12:51
GooareZ: Resident Evil7nFree Download all the latest games FREE!
14 Feb 15, 10:12
OO:ကျောင်းသားတွေက ရန်ကုန်မြို့ထဲဝင်မယ်။ အစိုးရက အ၀င်မခံနိုင်ဘူး ???????? feeling: စိတ်ပျက်
14 Feb 15, 10:09
13 Feb 15, 16:56
OO: ဘူးတို့ရုံးက မိုက်တယ် ၄နာရီခွဲထိပဲ ...... ရုံးဆင်းပြီ။ နက်ဖန်ရော ပိတ်လား
13 Feb 15, 16:54
tin: ၄နာရီခွဲတော့မယ်။ ရုံးဆင်းပြီ ရန်ကုန်မှာ။
OO: ကျွန်တော့် ဒယ်ဒယ်နဲ့မာမီ တို့ က ကန်ထရီ မှာနေတာပါ... အဲဒါကြောင့်မို့ ...
13 Feb 15, 16:52
tin: ဟုတ်တယ်လေ။ ရန်ကုန်က လာတာ..
tin: ပြန်တာမ ဟုတ် သွားတာ ဆိုတော့ မိသားစုက ဒီမှာပေါ့။
OO: ကိုဘူး က ရန်ကုန်က.... ဟုတ်တယ်နော်..
13 Feb 15, 16:50
OO: ရန်ကုန်ပြန်တာမဟုတ်ပါ... ကျွန်တော်က ရန်ကုန်သွားတာပါ..
tin: T2 ကဘယ်အကျိုးဆောင် ဌာန>>> ဟားဟား။
13 Feb 15, 16:48
T2: ၇န်ကုန်ခဏခဏ ပြန်တာ ၇ှာတွေ.မှာပါ။
13 Feb 15, 16:45
13 Feb 15, 16:44
T2: no. I am't agent.
13 Feb 15, 16:42
OO: ရှာတယ်..ကိုနဲ့ကိုက်ညီတာမတွေ့ သေးတာပါ... T2 ကဘယ်အကျိုးဆောင် ဌာနကလဲ..
13 Feb 15, 16:38
T2: ဈေးကွက် journel ကြည်. နောက်၇ပ်ကွက်ပွဲစားတွေနဲ.ချိတ်။ေ၇ာင်းမယ်.အခန်းတွေ အများကြီး
13 Feb 15, 16:33
OO: နေဘို့သက်သက်ဆိုတော့ ၂- ၃-၄ လွှာလောက် စဉ်းစားတာ.. T2
13 Feb 15, 16:31
OO: ဟုတ်တယ်... မြေညီထပ်တော့ သိပ်မကြိုက်..
13 Feb 15, 13:53
tin: ဗယ်လင်တိုင်းဒေးမှာ ချော့ကလက်တွေ ပန်းတွေ ပြည့်နေတဲ့ အခန်းတခန်းလောက် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင်တော့ ........(တတ်နိုင်တဲ့လူပျိုတွေကို မြှောက်ပေးမလို့ ပါ)
13 Feb 15, 11:44
T2: အုအူ ကတော လှိုင်သာယာ တန်ဖိုးနည်း ၁၀၀ူlhk ဆိုလား
13 Feb 15, 11:42
T2: haha... အဲဒီဘက်ကသန်.တယ်။ plinth ကလည်းမြင်.။ အလှူ ခံတော.ပေါနိုင်တယ်
13 Feb 15, 10:53
tin: မြေညီတော့ ရေဝင်၊ ကြွက်သောင်းကျန်း၊ ခြင်ပေါ၊ မြောင်းပုတ်နံ့နံ၊ အလှူ ခံပေါ။
T2:ေ၇ာင်းမယ်.သူ ၇ှိတယ် စမ်းချောင်း မြေညီ ၆၅၀ သိန်း
12 Feb 15, 16:21
tin: ဟုတ်တယ် bcd ဆိုတာလေ။ ကန် ။လည်း ကန်တယ် ။ ထ လည်း ထတယ် ။ရိုက် လည်း ရိုက်တယ်။ ကန် ထ ရိုက် လေ။
12 Feb 15, 16:09
OO: သူက ကန်ထရိုက်တာလား
12 Feb 15, 16:07
tin: အာ့ဆို သိန်း ၄၀၀ -၅၀၀ တောင် တာဝတိံသာနဲ့နီးနီးမှာပဲရမယ်။ ရ ထပ် ၈ ထပ် လောက်။ နေဦး ဗျ။ ရေကျော်က ဘဘ တစ်ယောက်ဒီထဲမှာ ၇ှိတယ်။ သူလာရင် မေးကြည့်လိုက်။
12 Feb 15, 16:04
OO: နိုး... ကြိုက်တာက ရေကျော်၊ စန်းချောင်း ၊ ဗဟန်းလဲ မဆိုးဘူးပဲ
12 Feb 15, 16:02
tin: ဘယ်နားနီးချင်တာလဲ။ ရွှေတောင်ကြားနဲ့ လား။
12 Feb 15, 16:01
OO: အင်းစိန် ဝေးတယ်
12 Feb 15, 16:00
tin: မုဒိတာ အိမ်ယာ ၁ တို့ ၂ တို့အင်းစိန်မြို့ သစ်ဖက်ထင်တယ်။
OO: ဟ့... ခုစုံစမ်းနေတာလေ...
tin: မသိဖူး။ ဟီး ဟီး။
12 Feb 15, 15:59
tin: ဟူတ်တယ်။ 1 MASTER 1 BED ROOM လို့ တော့ ပြောတာပဲ။ မတွေ့ ဖူး ဖူး။ စုံစမ်းကြည့်ပေါ့။
OO: ဟုတ်လား... မုဒိတာကဘယ်နားမှာလဲ
OO: ၂၀၀ လောက်ဆိုရင်ရနိုင်မလား
tin: မုဒီတာ အခန်းတွေတော့ ဈေးမဆိုးဖူး။ ကျဉ်းတယ်။ ဓါတ်လှေခါးပါတယ်။ ၂၀၀ ဝန်းကျင်လောက်။
12 Feb 15, 15:57
tin: ရိုးရိုးတိုက်ခန်းတွေက မကျပါဖူးဗျာ။ ဆက်မတက်တာ။
OO: ရန်ကုန်မှာ တိုက်ခန်းလိုချင်လို့ တိုက်ခန်းဈေးတွေကျနေတယ်ဆို
12 Feb 15, 15:56
tin: ခုမှ အူးရဲ့ဗျူးကို ဗူး ကဖြေနေရတယ်။
12 Feb 15, 15:55
OO: ကိုဘူးကြီး ရန်ကုန်ကလား
12 Feb 15, 15:51
12 Feb 15, 15:49
OO: ဟား....... တွေ.ဘီ။ ဘူး ကြီး.....
12 Feb 15, 15:45
tin: သံဖြူ မဟုတ်ဖူး။ ဗူး။ ဟားဟား။
12 Feb 15, 15:43
OO: tin က သံဖြူလား... ကိုဖြူလား
12 Feb 15, 15:42
OO: OO = အူး , 00 = ဇိုး , ၀၀=အုဝူ , ဝဝ = ၀ါ့
12 Feb 15, 15:37
tin: OO လား 00 လား ဝဝ လား ။
OO: 00 ကနေရာပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဘိုးရှိတယ်လေ..
tin: OO လား 00 လား မှန်မှန်ပြော။
12 Feb 15, 15:31
12 Feb 15, 15:23
tin: OO: က OO လား?
tin: ဝှိုက်ကဒ်ကိုဆောင်သူ မဲမပေးရေး ဆန္ဒပြနေတဲ့သူတွေ မျက်စေ့ရှေ့မှာတင် မဲမပေးရတော့တဲ့ ဝှိုက်ကဒ် တွေပျောက်သွားတယ်။ တော်လိုက်တဲ့ မျက်လှည့်။
12 Feb 15, 15:10
tin: အစိုးရသတင်းစာမှာ အသေအပျောက်မရှိတဲ့ တိုက်ပွဲ၊ ဖွဘွခ်ထဲမှာတော့ သောက်သောက်လဲပါလားဟရို့ ။
12 Feb 15, 14:53
OO: Popular news ; ကျောင်းသားသပိတ် ၇န်ကုန်လုံးဝအ၀င်မခံ VS Yangon media group ; ကျောင်းသားသပိတ်များဖြိုခွင်း၇န် အစီအစဉ်မရှိ
OO: T2 က လ၀က အရာရှိလား
12 Feb 15, 13:17
T2: ၁၉၄၉ & ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေထိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ရေး အက်ဥပဒေ link ၇၇င်ကောင်းမယ်
12 Feb 15, 13:12
T2: ညှိမယ် ။ ဘူဒိုဇာ နဲ.တဲ.
12 Feb 15, 10:03
tin: ၁၁ရက်တုန်းက ၁၁ ချက်ညှိပြီးပြီဆိုတော့ ဒီနေ့ ၁၂ ရက်နေ့ ကျတော့ရော.....
11 Feb 15, 17:38
T2: လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ရလာဒ်။ လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ ရလာဒ် အရ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားများ တောင်းဆိုထားသည့် အချက် (၁၁ ) ချက်လုံး ဆွေးနွေး သဘောတူ ပြီးဆုံးသွားပြီ ဖြစ်ပါသည်။ Pre Condition ၉ ချက် အောင်မြင်စွာရရှိခဲ့ပြီး နောက် တောင်းဆိုချက် ၁၁ ချက် ကို ဆက်လက်ဆွေးနွေး၍ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကို နောက်ရက်များတွင် ကော်မတီဖွဲ့ ၍ ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် အပ်ပါသည်။ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရဲရင့်ကျော် / ပိုင်ရဲသူ ၁၁. ၂. ၁၅ ညနေ ၄း၃၀
11 Feb 15, 16:37
11 Feb 15, 16:36
11 Feb 15, 16:35
T2: လူနာတွေက ဆန်ဒ ပြ
11 Feb 15, 16:34
tin: ဒါဆို ကျန်းမာရေးစားရိတ်တိုးတောင်းဖို့ ဆိုရင် ဘယ်သူတွေကဆန္ဒပြသင့်တယ်ထင်လဲ။
11 Feb 15, 16:31
T2: ပညာေ၇းဋ္ဌာနကလည်း အဲဒီလောက်မတောင်း။လွတ်တော်ကလည်း အဲဒီလောက်မပေး ဒါ.ကြောင်. သူတို.တောင်းတာ
11 Feb 15, 16:22
tin: အော် သိပြီ။ လွှတ်တော်ပြင်ပ ကနေပြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလုပ်ရမှာကို ဝင်ကူပေးတာပေါ့။ ဟုတ်။
11 Feb 15, 16:21
T2: အခု လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေတော.ပါတယ်။ လွတ်တော်မှာမဲပြန်ခွဲ ဖို.လိုမယ်ထင်တယ်
11 Feb 15, 16:20
T2: edit <<< အဲဒါ အချက် ၁၀ ပါ။
11 Feb 15, 16:18
tin: ပညာရေး ဘတ်ဂျက် % က လွှတ်တော်မှာဆွေးနွေး၇မှာ မဟုတ်ဖူးလား။
11 Feb 15, 16:14
T2: cp << ပညာရေး ဘတ်ဂျက် % ရာခိုင်နှုန်း ကိစ္စ အချက် ၉ ၊ အခြေအတင် ဆွေးနွေးနေဆဲ။ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ၁၁. ၂. ၁၅
11 Feb 15, 16:13
11 Feb 15, 16:11
tin: ခွင့်ပြုဖို့ က မဆွေးနွေးခင်ကတည်းက အမိန့် ရပြီးသားမို့ လို့ မြန်တာနေမှာပေါ့။
11 Feb 15, 16:02
T2: လက်ခံတာတွေက မြန်လွန်းတော. နောက်တိုး ၁၂ မှာ အထက်ပ်ါအချက်များ နောက် အနှစ် ၄၀ ဖြစ်နေအုံးမယ်
11 Feb 15, 15:53
tin: သိုင်းခယု သိုင်းခယု။ ဒီလို လိုတို၇ှင်းတွေ ဖတ်ချင်နေတာ။
11 Feb 15, 15:52
T2: နံပါတ် ၇ အောင်မြင်ပြီးပြီ။ နံပါတ် ၈ အောင်မြင်ပြီးပြီ။ နံပါတ် ၉ ကို စကားလုံးအားနည်းမူ့ ကြောင့် စာသားနည်းနည်းထပ်ဖြည့်ဖို့ အတွက် အချေအတင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးနေပါသည်။ သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေး ရဲရင့်ကျော် ပိုင်ရဲသူ ၁၁. ၂. ၁၅